Mudanayaasha baarlamaanka federaalka oo maanta ka doodaya shuruucda maaliyadeed ee dawladda. – Radio Daljir
Muqdisho, Sept 25 ? Mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta kulan uga furmay aqalka golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kaasoo ay uga doodayaan shuruuc dhinaca maaliyadda qusaysa.
Fadhiga xildhibaannada oo uu shir guddoominayo ku-xigeenka afhayeenka golaha wakiillada Cabdiweli Sh Ibraahim Muuddeey, ayaa looga hadlayaa sharci ku saabsan maaliyadda dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya taasoo nuqullo qeexaya shalay loo qaybiyey mudanayaasha.
Ku dhawaad 400 oo mudane ayaa la tilmaamayaa in ay fadhiga maanta ka soo xaadireen kuwaasi oo dood kulul ka leh qaabka iyo qorshaha shuruuceed ee maaliyadda dalka taasoo ah mid muddo dheer la hadal hayey horgaynteeda baarlamaanka.
Fadhigu inta uu socda waxaa lagu wadaa aqalka wakiillada in uu yimaado wasiirka maaliyadda dawladda federaalka, isagoo keeni doona qorshaha miisaaniyeed ee sannadka, waxaana iyana la tilmaamayaa in ay goob-joog ahaan doonaan waaxaha hanti-dhawridda ee isla dawladda.